ဟင်းချိုမှုန့်က ကြောက်စရာကောင်းတယ် ကြက်သားမှုန့်ကလည်း စိတ်မချရဘူး.. ကန်စွန်းဥနဲ့ ကိုယ်တိုင် ဟင်းခတ်မှုန့်လုပ် နိုင်ပြီ..။ – Sannla
Zawgy ဖြင်ဖတ်ရန် – အချိုမှုန့် အန္တရာယ်
ဖြေ။ ။ အချိုမှုန့်လို့ လူသိများတဲ့ အဖြူရောင် အမှုန့်လေးတွေနဲ့ ဓာတုဗေဒ အခေါ်အရ မိုနိုဆိုဒီယမ် ဂလူတမိတ် (Monosodium glutamate) ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုင်နိုအက်စစ် တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဂလူတမစ် အက်စစ် (Glu-tamic acid) မော်လီကျူး တစ်ခုရဲ့ ဆိုဒီယမ် အက်တမ်တစ်ခု (Sodium) ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဓာတု ဓာတ်ပစ္စည်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ MSG လို့ အတိုကောက် ခေါ်ပါတယ်။ အချိုမှုန့်ကို စတင်တီထွင်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ ကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ အာဂျီနိုမိုတို ကုမ္ပဏီ (Ajinomoto Co.,Inc.) ဖြစ်ပြီး စတင် ထုတ်လုပ်စဉ်က ကုန်ပစ္စည်း နာမည်ကို အာဂျီနိုမိုတို (Ajinomoto)လို့ နာမည် ပေးခဲ့တဲ့ အတွက် အချိုမှုန့်ကို အာဂျီနိုမိုတို လို့လည်း လူသိ များတယ်။ အာဂျီနိုမိုတိုရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ အရသာ ထူးကဲမှု (Essence of Taste) လို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။ တကယ်လည်း အချိုမှုန့် ထည့်လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းဟာ အရသာ ထူးကဲလာလို့ ဈေးကွက်မှာ တွင်ကျယ် လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ MSG ကို ၁၉ဝ၉ ခုနှစ် မှာ စတင် တီထွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ရာမှ ယနေ့ထိ ဈေးကွက် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရရှိထားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ ပြောရင် မမှားပါဘူး။ အခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်း ၁ဝ၆ နှစ် ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသလိုမျိုး ဖြစ်စေတော့ အချိုမှုန့်ပါတဲ့ ဟင်းနဲ့ စားနေကျ လူဟာ အချိုမှုန့် မပါရင် စာလို့ မကောင်းဘူးလို့ ထင်စေပါတယ်။ ဥပမာ-မုန့်ဟင်းခါး ဆိုင်မှာ ဟင်းရည်ထဲ အချိုမှုန့် ထည့်ပြီးချက်ရင် စားသုံးသူတွေကို ပိုမို ဆွဲဆောင်မှု ရှိပြီး အဲဒီ မုန့်ဟင်းခါးကိုပဲ မစားရ မနေနိုင် ဖြစ်လာ စေပါတယ်။ ရောင်းတဲ့သူ အတွက် ကောင်းပေမယ့် စားသုံးသူ အတွက်တော့ ကြာရင် ဒုက္ခတွေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း လေ့လာ တွေ့ရှိချက်တွေ အရ အာရုံကြော အဖွဲ့အစည်းကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် ထုံတာ၊ ကျဉ်တာ၊ မီးစနဲ့ ထိုးသလို ပူလာတာ (Burning Sensation) တွေလည်း ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းတစ်ဝိုက် ဖြစ်ရင်တော့ အချိုမှုန့်ကြောင့် ဖြစ်တတ်တယ် ဆိုတာ သတိထား ရပါမယ်။ အသုံးများတာ ကြာလာရင် အာရုံကြော အဖွဲ့အစည်းကို ထိခိုက်ဖျက်ဆီးတဲ့ အတွက် ပါကင်ဆန် ရောဂါ (Parkinson’s disease) ၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ (Alzheimer’s disease) ၊ ဟန်တင်တန်ရောဂါ (Huntington’s disease) နဲ့ MS လို့ အတိုကောက် လူသိများတဲ့ Mul-tiple Sclerosis ရောဂါ တွေဟာလည်း အချိုမှုန့် စားသုံးမှုနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိနေမှန်း သိလာကြရ ပါပြီ။ ဒီကနေ့ ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ အော်တစ်ဇင်ရောဂါ (Autism) ဟာလည်း ကလေးနဲ့ မိခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည် ကာလမှာ စားသုံးမှု ဒါမှမဟုတ် ကလေးမွေးပြီး နို့တိုက်စဉ် ကာလမှာ စားသုံးမှု ဒါမှမဟုတ် ကလေးကို ကျွေးတဲ့ အစာထဲမှာ အချိုမှုန့် ပါဝင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သံသယတွေ ရှိလာလို့ လေ့လာမှုတွေလည်း ပြုလုပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။နှလုံးရောဂါနဲ့ သွေးတိုးရောဂါသည်တွေ အနေနဲ့ MSG ကို ရှောင်ကြဉ် သင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ MSG ဟာ နှလုံး ကြွက်သားတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးခုန် မမှန်တာ (Irregu-lar heart beat) ၊ နှလုံးကြွက်သားတွေ သေသွားတာ (Cardiac muscle arrest) ၊ ရင်ဘတ်အောင့်တာ (Chest pain) တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သွေးအတွင်း ဆိုဒီယမ်ဓာတ်တွေ ပိုများလာတဲ့ အတွက် သွေးတိုးကို ပိုဆိုးစေ ပါတယ်။ Congestive Cardiac Failure လူနာတွေ ဆိုရင် လုံးဝ ရှောင်ကြဉ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးမှာရှိတဲ့ အဆို့ရှင် လေးတွေ မကောင်းတဲ့သူတွေ (Valvular Heart Disease) ၊ မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါ ရှိသူတွေ (Congestive Heart Disease) လည်း ရှောင်ကြဉ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို အချိုမှုန့်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျန်းမာရေး အတွက် သတိထား ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့ အချက်တွေကိုပါ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှင်းပြပေးတဲ့ ဆရာ့ကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ ။
Credit: Shyun Lae Yi Hlaing Unicode – ဟငျးခြိုမှုနျ့က ကွောကျစရာကောငျးတယျ ကွကျသားမှုနျ့ကလညျး စိတျမခရြဘူး.. ကနျစှနျးဥနဲ့ ကိုယျတိုငျ ဟငျးခတျမှုနျ့လုပျ နိုငျပွီ..။
ဖွေ။ ။ အခြိုမှုနျ့လို့ လူသိမြားတဲ့ အဖွူရောငျ အမှုနျ့လေးတှနေဲ့ ဓာတုဗဒေ အချေါအရ မိုနိုဆိုဒီယမျ ဂလူတမိတျ (Monosodium glutamate) ဖွဈပါတယျ။ အမိုငျနိုအကျစဈ တဈမြိုးဖွဈတဲ့ ဂလူတမဈ အကျစဈ (Glu-tamic acid) မျောလီကြူး တဈခုရဲ့ ဆိုဒီယမျ အကျတမျတဈခု (Sodium) ပေါငျးစပျထားတဲ့ ဓာတု ဓာတျပစ်စညျး တဈခု ဖွဈပါတယျ။ MSG လို့ အတိုကောကျ ချေါပါတယျ။ အခြိုမှုနျ့ကို စတငျတီထှငျခဲ့တဲ့ အဖှဲ့ ကတော့ ဂပြနျနိုငျငံမှာ ရှိတဲ့ အာဂြီနိုမိုတို ကုမ်ပဏီ (Ajinomoto Co.,Inc.) ဖွဈပွီး စတငျ ထုတျလုပျစဉျက ကုနျပစ်စညျး နာမညျကို အာဂြီနိုမိုတို (Ajinomoto)လို့ နာမညျ ပေးခဲ့တဲ့ အတှကျ အခြိုမှုနျ့ကို အာဂြီနိုမိုတို လို့လညျး လူသိ မြားတယျ။
အာဂြီနိုမိုတိုရဲ့ အဓိပ်ပာယျကတော့ အရသာ ထူးကဲမှု (Essence of Taste) လို့ အဓိပ်ပာယျ ရပါတယျ။ တကယျလညျး အခြိုမှုနျ့ ထညျ့လိုကျတဲ့ ပစ်စညျးဟာ အရသာ ထူးကဲလာလို့ စြေးကှကျမှာ တှငျကယျြ လာခဲ့ခွငျး ဖွဈပါတယျ။ MSG ကို ၁၉ဝ၉ ခုနှဈ မှာ စတငျ တီထှငျ ထုတျလုပျခဲ့ရာမှ ယနထေိ့ စြေးကှကျ ခိုငျခိုငျမာမာ ရရှိထားတဲ့ ကုနျပစ်စညျးတဈခုလို့ ပွောရငျ မမှားပါဘူး။ အခုဆိုရငျ နှဈပေါငျး ၁ဝ၆ နှဈ ရှိခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။
ဆရာမင်းသိင်္ခ ၏ ၂၈. ၂. ၂၀၁၈ မှ ၆. ၃. ၂၀၁၈ ထိ ခုနစ်​ရက်​သားသမီးများအတွက်​ တစ်​ပတ်​စာ ​ဟောစာတမ်း